1 Joany 3 - Ny Baiboly
16Izao no nahafantarantsika ny fitiavana: nahafoy ny ainy ho antsika izy. Koa tsy maintsy mahafoy ny aintsika ho an'ny rahalahy koa isika. 17Raha misy manan-karena amin'izao fiainana izao, ka mahita ny rahalahiny mahantra, nefa mihirim-belona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? 18Anaka, aza tia am-bava sy amin'ny teny fotsiny, fa amin'ny asa sy amin'ny fo tokoa. 19Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika, sy hahazoantsika mampatoky ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra. 20Fa raha ny fontsika aza manameloka antsika, mainka fa Andriamanitra, izay lehibe noho ny fontsika, sady mahalala ny zavatra rehetra. 21Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia mahazo manatona an'Andriamanitra amin-toky isika. 22Ary na inona na inona angatahantsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo imasony isika. 23Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika an'i Jesoa-Kristy Zanany, sy ny hifankatiavantsika, araka ny didy nomeny antsika. 24Izay mitandrina ny didiny, dia mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy; ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny Fanahy izay nomeny antsika. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0577 seconds